कहाँ पाइन्छ रोजगार ? सम्भावना वेब डिजाइनमा | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
कहाँ पाइन्छ रोजगार ? सम्भावना वेब डिजाइनमा
Posted on फ्रेवुअरी 3, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	राजधानीका कलेजहरूका बारे कुनै पनि जानकारी लिनुपर्‍यो भने अब कम्प्युटरमा बसेर खोजे पुग्छ । धेरैजसो कलेजका आफ्नै वेबसाइट छन् । सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्रबाट मात्र होइन, व्यक्तिगत रूपमा समेत वेबसाइट सञ्चालन गर्ने लहर चलेको छ । साइवरसंसार डटकमका दिपंकर कसजू भन्छन्- ‘केही वर्षअघिसम्म ठूला होटल तथा ट्राभल एजेन्सीको मात्र वेबसाइट थियो, अहिले सबैले यसको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।’
सन् १९९७ मा रहरैरहरले साइवरनेपाल डटकम सञ्चालन गरेका कसजू दाजुभाइले अहिले यसैमा आफ्नो करियर बनाएका छन् । अहिले उनीहरू डि्रम्स एन्ड आइडिआज नामक कम्पनी स्थापना गरेर साइवरसंसार, इ-नसा र मोडलसंसार डटकम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा करियरको प्रशस्तै सम्भावना रहेको अभिनव बताउँछन् । खासगरी वेबडिजाइनरका रूपमा युवायुवतीहरूले काम गर्न सक्ने उनले बताए । ‘वेबसाइट सञ्चालन गर्ने लहरले युवाहरूमा रोजगारीको अवसर खोलिदिएको हो,’ दिपंकर भन्छन्- ‘लगनशील र सिर्जनशील क्षमताका युवाहरूले यस क्षेत्रमा हात हाल्न सक्छन् ।’
युगले फड्को मारेको छ । भनिन्छ, ‘सूचना-प्रविधिको यो युगलाई पच्छ्याउन चाहनेहरू आफूलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न चाहन्छन् । समयसापेक्ष परिवर्तन हुन चाहने जो-कोही सूचना-प्रविधिबाट अलग हुन सक्दैनन् ।
सूचना-प्रविधिको सशक्त माध्यम हो- वेबसाइट । सूचना एवं जानकारी निमेषभरमा सम्प्रेषण गर्न यो माध्यम विश्वभर अपनाउने गरिएको छ । कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो उत्पादनका सम्बन्धमा जानकारी दिन होस् वा संघ-संस्थाले आफ्नो सेवासम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न, वेबसाइटको प्रयोग गर्न थालेका छन् । कमर्सियल रूपमा वेबसाइट सञ्चालन गर्नेहरू पनि कम छैनन् । यो लहरले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकलाई पनि छोएको छ । नेपालमा सरकारी तहदेखि विभिन्न उद्योग तथा संघ-संस्थाहरूले आ -आफ्नै वेबसाइट सञ्चालन गरेका छन् । ‘आफ्नो सेवा, सुविधा तथा उत्पादनका सम्बन्धमा जानकारी दिनुका साथै नयाँ घटनाक्रमको जानकारी दिन यो माध्यम अपनाउने क्रम बढ्दो छ,’ लभ्ली पोखरा डटकमका वेब प्रोग्रामर गणेश खड्का भन्छन् । यसरी वेबसाइट सञ्चालन गर्ने नयाँ ट्रेन्डले युवापुस्तालाई रोजगारीको अवसर दिएको छ । यही क्षेत्रमा रोजगारी गरेर जीवनयापन सहज बनाउन सकिने खड्का बताउ ँछन् । खासगरी वेब डिजाइनरका रूपमा काम गरेर मनग्गे आम्दानी लिन सकिने उनले बताए ।
के हो वेबडिजाइन ?
वेबसाइटको खाका तयार गर्नेदेखि त्यसलाई अनलाइनमा सञ्चालन गर्नेसम्मको काम गर्ने व्यक्ति नै वेबडिजाइनर हो । सामान्यतः वेबसाइट पनि पत्रपत्रिकाकै साजसज्जामा प्रस्तुत गरिन्छ । यसलाई विद्युतीय पत्रिका पनि भनिन्छ ।
सर्भर साइट, स्त्रिmप्टिङ र होस्टिङसम्मको काममा दक्षता हासिल गरेपछि वेबडिजाइनर वन्न सकिन्छ । वेबसाइटको डमी तयार गर्ने, आकर्षक साजसज्जा दिने, विभिन्न प्राविधिक फङ्सन मिलाउने र अनलाईनमा लाने काम वेबडिजाइनरले गर्नुपर्छ ।
कम्प्युटरमा आधारभूत ज्ञान लिएपछि एउटा छुट्टै प्याकेजअन्तर्गत वेब डिजाइनरको कोर्स गर्न सकिन्छ । राम्रो कम्प्युटर इन्स्िटच्युटबाट छोटो वा लामो अवधिको तालिम प्राप्त गरेर वेब डिजाइनसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसो त एकेडेमिक कोर्सअन्तर्गत बीएस्सी कम्प्युटर साइन्स एवं बीसीए कोर्समा पनि वेबडिजाइन अध्ययन गर्न सकिन्छ । तालिम केन्द्रबाट यो कोर्स गर्दा न्यूनतम २० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यति खर्चले वेबडिजाइनमा डिप्लोमा कोर्स गर्न सकिन्छ ।
के सिक्नुपर्छ ? यो एउटा प्राविधिक कोर्स हो । यो कोर्स गर्नुअघि कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञान लिएको हुनुपर्छ ।
छुट्टै प्याकेजअन्तर्गत वेबडिजाइनको कोर्स सिकाइन्छ । सुरुमा पेज तयार गर्न विगिनर प्रोगामिङ सिक्नुपर्छ । यसमा एचटिएमएल कोडका सम्बन्धमा जानकारी दिइन्छ । त्यसपछि जाभा स्त्रिmप्टमार्फत पेजलाई डाइनामिक वनाउन सिकाइन्छ ।
जाभा स्त्रिmप्ट सिकेपछि लेआउट तयार गर्न ग्राफिक्स कोर्स गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सर्भर साइट स्त्रिmप्टिङअन्तर्गत एएसपी, पिएचपी, जेएसपिमार्फत डाटाबेससँग सम्पर्क गराउने काम सिकाइन्छ । स्टोरेजका लागि डाटाबेस सिक्नुपर्छ । एसक्युएल, माइ एसक्युएलको कोर्स गरेपछि त्यसलाई सर्भरमा अपलोड गर्ने काम सिकाइन्छ ।
कुनै पनि कम्प्युटर तालिम केन्द्रबाट यो कोर्स गर्न छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाग्न सक्छ । वेबडिजाइनिङका सम्बन्धमा गहन अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ ।
वेबडिजाइनरमा धैर्यता एवं सिर्जनशील क्षमता हुनुपर्छ । अधैर्य व्यक्तिले वेबडिजाइन जस्तो झन्झटिलो काम गर्न सक्दैनन् । एउटा सानो काम गर्न पनि लामो समय लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, उत्तिकै मेहनत पनि गर्नुपर्छ ।
कहाँ पाइन्छ रोजगार ?
आइटी क्षेत्र वेब डिजाइनरका लागि राम्रो प्लेटर्फम हो । त्यसैगरी सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थामा पनि वेबसाइट विज्ञको माग हुन्छ । अहिले सरकारी संस्था, एनजीओ, आइएनजीओको अफिसियल वेबसाइट बनाउने गरिएको छ । त्यस्तै कुनै पनि उद्योगमा पनि वेब डिजाइनरको माग हुन्छ । कम्पनीले आफ्नो उत्पादनका सम्बन्धमा जानकारी दिन वेबसाइट सञ्चालन गर्ने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा वेबडिजाइनरको आवश्यकता परेको हो । सञ्चारगृहदेखि कमर्सियल रूपमा वेबसाइट सञ्चालन गर्नेहरूमा पनि वेबडिजाइनरको माग हुन्छ । कुनै पनि संस्थामा आबद्ध भएर वा स्वतन्त्र रुपमा वेबडिजाइनरका रूपमा रोजगारी गर्ने थुप्रै अवसर यो पेसामा छ ।
गणेश खड्का वेब प्रोगामर, लभ्ली पोखरा डटकम
वेब डिजाइनमा कस्तो सम्भावना देख्नुभएको छ ?
नयाँ क्षेत्र एवं समयानुकूल पेसा अपनाउन चाहने युवायुवतीका लागि वेब डिजाइनिङ राम्रो क्षेत्र हो । नेपालमा अहिले वेबसाइट सञ्चालनमा तीव्रता आएको छ । यस्तो वे ला यस क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहनेहरूका लागि थुप्रै सम्भावना छ ।
वेब डिजाइनरले कुन-कुन क्षेत्रमा रोजगारी पाउन सक्छन् ?
वेब डिजाइनरकै रूपमा कुनै पनि आइटी सम्बद्ध संस्थामा काम गर्न सक्छन् । त्यस्तै, व्यक्तिगत रूपमा वेब डिजाइनिङ गरेर पनि आम्दानी लिन सकिन्छ ।
कमाइ कति हुन्छ ?
कमाइ यति नै हुन्छ भनेर तोक्न नसकिए पनि यसबाट प्रशस्तै आम्दानी लिइरहेका उदाहरण हाम्रै समाजमा भेटिन्छ । खासगरी उसले काम गर्ने क्षमतामा पनि कमाइ निभर् र हुन्छ । जे होस्, तुलनात्मक रूपमा वेब डिजाइनरले आकर्षक कमाइ गर्न सक्छन् ।
वेब डिजाइनर कसरी बन्ने ?
सामन्यतः कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान भएका र नयाँ विषयप्रति रुचि भएका व्यक्तिले वेब डिजाइनरको कोर्स गर्न सक्छन् । यसमा धैर्यता र सिर्जनशीलता आवश्यक छ । यो कोर्स गर्न त्यति धेरै खर्च लाग्दैन ।
Filed under: समचार « उद्धार गर्दैमा समय वित्छःहमिद अन्सारी (राजदुत साउदी अरेबिया) खाडीमा नेपाली हुनुको पीडा »